Commitment Issues | Hash Tech Guru
အလုပ်လုပ်ရင် Commitment & Focus လိုတယ်ဆိုတာ ၂၅ လောက်ရောက်မှပဲ ကောင်းကောင်းသိတယ်… Commitment ဆိုတာက ပေးတာက ခဏပဲ ပေးလို့ မရဘူး… အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ပေးနိုင်မှ Commitment လို့ခေါ်တယ်… ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်နိုင်မှရတယ်… ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒါပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရတယ်… ဟိုဟာလုပ်လိုက် ဒီဟာလုပ်လိုက်ဆိုရင် ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဖူး.. Developer တွေ အဖြစ်များတယ်.. Trend နောက် အရမ်းလိုက်လွန်းတယ်.. NodeJS ခေတ်စားတယ်ဆိုတော့ NodeJS.. Go Language လူပြောများတယ်ဆို Go Language… Flutter လေးက မိုက်တယ်ဆို Flutter ကြပြန်ပြီ… ကိုယ့်အမြင်ပြောရရင် ဒါခေတ်စားတယ်ဆိုရင် လိုက်လုပ်ကြည့်.. လေ့လာကြည့်.. ပြီးရင် ကိုယ်လုပ်နေတာကို ပြန်ဆက်လုပ်.. ကိုယ် အဓိကလုပ်နေတဲ့ဟာ မပျက်ဘဲနဲ့ ကောင်းကောင်း Commitment ပေးနိုင်ရင် ရပြီ… ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စရွေးထဲက သေချာ ရွေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့
Focus လုပ်နိုင်တာကတော့ လူတိုင်းမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူဘူး… အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ဆရာတယောက်ပြောဖူးတယ်… အခု အသက် ၂၉ မှာ ငါ ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလောက် Focus လုပ်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်.. အမှန်တော့ အသက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်.. Focus လုပ်နိုင်တဲ့ Power က တဖြည်းဖြည်း တက်လာတာကိုး
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု စေ့စပ်သေချာအောင် လုပ်တတ်တာကလဲ အသက်ကြီးမှပဲသိလာတာ… ဘယ်လို နည်းပညာတွေပဲ မိုးပျံအောင်တတ်တတ် စောက်ရမ်း ကျွမ်းလွန်းလို့ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေ ထွက်ပလေ့စေဦး… တကယ်တန်း အလုပ်လုပ်တာ မစေ့စပ်ရင် မသေချာရင် ဘာမှမထူးဘူး.. ကိုယ့်အတွက်တော့ ဒါကတော့ Internet ဆိုင်တွေ လိုက်ဆင် Servicing တွေ ပေးတုန်းထဲက သိပြီးသား.. ကိုယ်မသေချာရင် အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက် အချိန်ကုန်ပြီပဲ..
Programmer တွေ Developer တွေမှာ Personality ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ တည်ဆောက်ယူရတာပဲ.. တကယ်တန်း ကိုယ်က Programmer ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် Developer ကောင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကိုယ့် Focus + Commitment နဲ့ အများကြီးဆိုင်တယ်.. ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို Respect ပေးတတ်ဖို့လဲ လိုသေးတယ်.. ဒီပညာကို သုံးပြီး ပိုက်ဆံပဲ ရှာဖို့ စဉ်းစားနေလို့လဲ မရသေးဘူး… ထိုက်သင့်တဲ့ ဝမ်းစာ ဖြည့်ဖို့လဲ စဉ်းစားရမယ်
နောက်တစ်ခုက အချင်းချင်း Respect ထားဖို့ပဲ.. ကိုယ်ကုတ်ရေးတတ်ကာစ ခပ်ငယ်ငယ်က ကိုယ့် Project က လွဲရင် ကျန်တဲ့ကောင် ကုတ်လာပြရင် အကုန်လုံး Shit Code လို့ပဲ ထင်တာပဲ.. ရှေ့ကလုပ်တဲ့ကောင် စောက်ရူး… ဘာတွေ ရေးထားမှန်း မသိဘူးပေါ့.. အသစ်က ပြန်ရေးမယ်ပေါ့.. ရေးရင်းရေးရင်း အချိန် ၂ ဆကုန်… တိုင်တွေပတ်.. တဖြည်းဖြည်း ရေးရင်း ရှေ့ကလူ ရေးတဲ့အတိုင်းပဲ ပြန်ဖြစ်လာတာပါပဲ.. နောက်ကျတော့ အပါးဝလာတော့ Dirty Code တွေကြည့်တတ်လာ.. သူများ Architecture တွေ ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတာ Review လုပ်တတ်လာတာပဲ… အချိန်ကုန်သက်သာလာတာပေါ့.. အဓိကက အရှေ့ကရေးသွားတဲ့လူကို စောက်ရူးလို့ သဘောမထားတာကနေ စတာပဲ.. နောက်ကျ Mutual Respect တွေထားတတ်လာတယ်.. သူတို့ Effort တွေကို Appreciate လုပ်တတ်လာတယ်..
Code ရေးတတ်ကာစ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ Level ကနေ လုပ်စရာရှိတာ ကုတ်ကုတ် ကုတ်ကုတ် သောက်စကားမများပဲ ကုတ်ပဲ ပြတဲ့ Level ကို တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာပါပဲ… ကြားထဲမှာ မအိပ်ရတဲ့ ညပေါင်းများစွာတော့ အရင်းအနှီးပေးရတာပေါ့…